Apple Silicon iMac Ayaa Ka Muuqda Xcode Crash Log | Waxaan ka socdaa mac
Apple Silicon iMac wuxuu ka muuqanayaa diiwaanka burburka Xcode
Waxaan nahay guuto marwalba ka warqabta wararka ka imanaya Apple. Faahfaahin kasta, si kasta oo ay u qiimo yar tahay waxay umuuqataa, qalab la soo saarayo oo shirkaddu ku hayso qarsoodi ah waa war.
Mid ka mid ah legionnaires, wuxuu ogaaday faahfaahin markii uu barnaamijka ka waday Xcode in badankood aan la ogaan lahayn. Diiwaan khalad ah, mashiin aad u xiiso badan: iMac leh macOS 11.2.1 iyo Qalabka ARM. Sida iska cad, wuxuu waqti u waayey inuu ku baahiyo shabakadaha. Yay noqon doontaa
Maalmo ka hor ayaan horey u daabacnay noticia in Apple ay joojisay sameynta qaar ka mid ah 21,5-inch oo sawirada iMac ah. Iyaguna way ordaan xanta on processor cusub ARM for Macs, ka M1X, oo leh awood garaaf badan, iyadoo aan loo eegin isticmaalka, sidaa darteed loogu talagalay desktop desktop-ka.
Haddana, si loo dhammeeyo, waxaa jira calaamad cusub oo iMac ah oo leh processor ARM ah oo raadkeeda ku reebtay diiwaanka khaladaadka Xcode. Haddii tan aan ku darno wararkii hore ee dhaqameed ee ahaa in Ming-Chi Kuo uu naga tagayo, wax walba waxay muujinayaan qaar cusub iMac Apple Silikoon Ayaa dhacaya.
Muhiimadu waxay tahay Apple app-ka sameeysa Dennis Oberhoff, Waxaan la shaqeynayay arjiga DaftCloudMarkii uu ka helay diiwaanka qufulka ee Xcode xoogaa xiiso leh, ayay ishiisu qabatay. Diiwaanka wuxuu muujinayaa xogta mashiinka halka qaladku ka dhacay: iMac, oo ku shaqeeya macOS 11.2.1 oo leh 64-bit ARM processor.
U fiirso waxa hadda ku soo ifbaxay 'Xcode Crashreporter' ee macOS. iMac - ARM64 🙂 pic.twitter.com/tPr4mYhYvU
Taasi waxay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah injineerada Apple oo leh iMac uu ku yiri tijaabooyinka, qaladkaas ku lahaa dalabka DaftCloud, waana ay aheyd diiwaangashan. Haddii ay jiraan cutubyo yar oo horeyba u shaqeynayey, hadda injineerka aan waxba galabsan ayaa durba dhirbaaxo kulul ka qaaday shirkadda.
Xadhig kale oo lagu xidho oo lagu qiyaaso in dhawaan aanu awoodi doonno inaanu aragno wax cusub iMac suuqa, horeyba waayaha cusub Apple Silicon. Runtuna waxay tahay dib u cusboonaysiinta kombiyuutarada kumbuyuutarka ee Apple ayaa imanaya. Gudaha iyo dibaddaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple Silicon iMac wuxuu ka muuqanayaa diiwaanka burburka Xcode
Filimka Cherry, ayaa horseed u ahaa soo saarista oo la sii daayay usbuucii hore
Qiimo dhimis badan oo firfircoon iyo markan Tado waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis dhan 35%